Huteelada casriga ah ee Jigjiga oo aan heerar kala duwan u kala soocneyn. - Hargeele - Wararka Somali State
Huteelada casriga ah ee Jigjiga oo aan heerar kala duwan u kala soocneyn.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada DDS ku soo badanayan Huteelada casriga ah ee aadka u sareeya, hadana malaha huteeladaasi in aany u kala qaybsaneyn heerarka ama darjada lagu cabiro Huteelada sida: ( Darajada. 5 xididgood, 4 xidigood iwm).
Milkiilayaasha Huteelada ayaa warbaahinta SRTV u sheegey in ay iyagu ku talo jiraan in ay heerarkaas sameeyaan laakiin ay wax badan ku xidhan yihiin xafiisyada dawlada qaarkood gaar ahaan dalxiiska iyo ganacsiga .
Wasiirka ku xigeenak xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska mudane salaad Dhabar yusuf ayaa sheegey in ganacsatadu marka ay dhisayaan Huteeladan oo kale ay iska xil saaraan wixii ay dhisayaan in uu noqdo mid u qalma heerkii loo baahnaa, sidoo kale cuntada in ay sidaas oo kale noqoto, wixii anaga xafiis ahaan nagu xidhan waanu sameyeney waanan u sahlaynaa ayuu yidhi wasiir ku xigeenku
Bajaajley la ganaaxey.
Baarlamaanka shucuubta koonfurta oo madax weyne u doortey Ristu Yirdhaaw
Wasiirka maaliyada ee JDFI Axmed Shide ayaa kulan wada xaajood ah la yeeshey maareeyaha wakaalada horumarinta Faransiiska.